इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा किन अवश्य छ | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा किन अवश्य छ
इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा किन अवश्य छ
(Last Updated On: 29/01/2020)
गाडिहरु मौसम बिना इटाली यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. तथापि, तिनीहरूले साबित सुरक्षित र अधिक आरामदायक विकल्प, विशेष गरी जाडो समयमा. इटाली जाडो रेल यात्रा मात्र सुरक्षित छैन, तर यो पनि हो छिटो र कुशल.
यस्तो सही इटाली को केन्द्र तल Trenitalia रन रूपमा उच्च गतिको रेल लाइनहरू. Trenitalia Frecciarossa भनिन्छ, Frecciargento or Frecciabianca depending on the line. Trains link practically every town or city in Italy, प्रत्येक गन्तव्य को केन्द्र तपाईं लिइरहेको. नापोलि - मुख्य रोक्दछ सलर्नो छन् (नेपल्स) - रोम (रोम) - फ्लोरेन्स (फ्लोरेन्स) - बोलोग्ना - मिलान (मिलान) - टोरीनो (ओस्लो). भेनिस गर्न रोम एक चिल्लो छ3घण्टा र 45 मिनेट यात्रा गर्दा एक फ्लोरेन्स देखि यात्रा रोम एक मात्र छ 1 घण्टा र 32 मिनेट.
किनभने गति र सुविधा को इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा को लागि महत्वपूर्ण छ, तपाईंले सबै देशको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ शीर्ष गन्तव्यहरू चाँडै र आराम. यहाँ शीर्ष पाँच यो जाडो इटाली रेल द्वारा यात्रा गर्न शहर हो.
1. नेपल्स – इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा को लागि हाम्रो ओपनर छ
जो चाहनुहुन्छ ती चिसो टाढा प्राप्त गर्न को लागि नेपल्स आदर्श छ. यसलाई सधैं नेपल्स घाम छ! जब यो आउँछ क्रिसमस पर्वहरू, नेपल्स इटाली अन्य सबै शहर माथि चमकता. तिनीहरूले टाढा सास हुनेछ भनी क्रिसमस Nativity दृश्य छ. तपाईं शहर भन्दा ती सबै देख्ने. धेरै भन्दा सुन्दर एक छ भन्ने कुरामा सहमत हुनेछ मार्फत सान Gregorio Armeno.
यो छोटो र एक घण्टा र एक आधा किनभने टस्क्यानी गर्न रोम इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा मा एक शीर्ष मार्ग छ रेल सवारी टाढा. तपाईं छुट्टी बिक्री आनंद र भ्रमण इटाली गरेको राजधानी मा आफ्नो दिन सुरु गर्न सकिएन भेटिकन संग्रहालयहरु. lunchtime द्वारा, तपाईं एक रेल र दुई भन्दा कम घण्टामा हप सक्छ, सुरम्य टस्क्यानी आफूलाई फेला. लिन एक थर्मल मा स्नान तपाईँको दिन बन्द टोपी पानी स्पा.
तपाईं wintertime dreary फेला पार्न र चिसो घृणा भने मौसम; त्यसपछि पालेर्मो यात्रा तालिम. सिसीली खुर्सानी तपाईंको भाग्ने छ उत्तरी युरोप यसलाई नजिक महसुस एउटा वातावरण प्रदान गर्दछ रूपमा गर्मी वा वसन्त. तपाईं पनि मदत गर्न सक्दैन तर सहरका क्रिसमस बजार प्रेम पर्नु, Nativity दृष्य, र मध्ययुगीन आकर्षण.
एक चिसो भने ओस्लो को शहर उत्तरी टाउको स्किइङ Getaway जाडो आनन्द को आफ्नो विचार छ. नाइस आल्प्स आफ्नो इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा गेटवे छ. नछुटाउनुहोस् Luci d'प्रसिद्ध. यो वार्षिक समकालीन कला हो प्रदर्शनी अप शानदार प्रकाश प्रतिष्ठानहरु संग शहर रोशनी.
भेनिस जाडो सफा अर्थ, कुरकुरा हावा र कम भीडलाई यसको सौन्दर्य तपाईंले अलमल्याउन. वर्ग मा एक ट्रक सवारी वा घूंट कफी आनन्द. तपाईंको भेनिस अनुभव पनि अधिक जादुई बनाउन हल्का snowfall को संभावना सधैं त्यहाँ.
कसरी इटाली शीतकालीन ट्रेन यात्रा को लागि टिकट खरिद गर्न
अग्रिम टिकट खरीद आफ्नो जीवन कम तनावपूर्ण बनाउँछ. लागि लामो-दूरी रेल यस्तो Frecciarossa रूपमा, Frecciargento, frecciabianca, reserved seating is mandatory.
स्टेशन मा व्यक्ति एक टिकटको खरीद सधैं एक विकल्प छ. तथापि, लामो रेखा र असुविधाको र लागि तयार हुन उच्च मूल्यहरु. यस दिन र उमेर मा, यो आरक्षित आदर्श बन्न तपाईँको रेल सिट अनलाइन. यसलाई अग्रिम कति टाढा आउँछ जब तपाईं आफ्नो टिकट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, जवाफ प्रकार निर्भर हुनेछ इटालियन रेल.
Frecce गाडिहरु छन् उच्च गतिको रेल इटाली गरेको प्रमुख शहर बीच कि रन. तिमी सक्छौ प्रारम्भिक रूपमा आफ्नो टिकट किन्न आफ्नो यात्रा मिति अघि चार महिना रूपमा. हालै, Trenitalia यसलाई आफ्नो बुकिंग बादल मडारिरहेको वृद्धि भनेर घोषणा6अगाडि महिना.
अग्रिम आफ्नो सिट बुक, र तपाईंले केही महत्वपूर्ण छूट पनि आनन्द छौँ. यो छुट र अग्रिम टिकट सामान्यतया गैर-परिर्वतनशील र गैर-फिर्तीयोग्य हुन् रूपमा आफ्नो यात्रा तिथिहरु पक्का छन् भने आफ्नो टिकट किन्न सर्वश्रेष्ठ छ. सम्पर्क बचत एक ट्रेन इटाली जाडो रेल यात्रा मा कुनै प्रश्न लागि.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-train-travel-italy/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, र तपाईं / ES वा / यो र अधिक भाषा गर्न / zh-CN परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#traveleurope यूरोपेन्ट्रावेल europetravel longtrainjourneys सुझाव trainjourney Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह रेल यात्रा यात्रा यात्रा
शीर्ष5ब्रसेल्स देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा लक्जमबर्ग, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
5 ट्रेन द्वारा युरोप अन्वेषण गर्न डिसेम्बरमा कारण
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप
5 सर्वश्रेष्ठ साइकल युरोप मा यात्रा गर्न ट्रेल्स
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, यात्रा युरोप